Arsenal oo guul wax ku ool ah ka gaartay kooxda BATE Borisov una gudubtay wareega 16-ka +Sawiro – Gool FM
Bashiir February 21, 2019
( Yurub ) 21 Feb 2019 Waxaa soo dhamaaday kulan ciyareedkii u dhaxeyey kooxaha Arsenal iyo BATE Borisov kulan ka tirsanaa wareega 32-koox lugtiisa labaad waxaana guul gaartay kooxda Arsenal.
Arsenal oo halis ugu jirtay in ay ka harto tartanka madaama laga soo adkaaday kulankii lugtii hore ciyaar ku soo dhamaatay 1-0 , balse Arsenal ayaa sameesay soo laabasho cajiib ah qeebtii koowaad ee ciyaarta ka dib markii ay la yimaadeen labo gool iyada oo lagu ciyaarayo garoonkooda.
Goolka koowaad ayaa ahaa mid ay iska dhliyeen ciyaartoyda kooxda BATE Borisov waxaana gool kam ah isla dhaliyey xidiga lagu magacaabo Volkov daqiiqadii 4-aad ee ciyaarta.
Arsenal oo dhiiri gilin buuxda ka heleysa tageerayaasheeda ayaa la timid goolkii labaad ee ciyaarta oo ahaa kubad madax ah waxaana u dhaliyey daqiiqadii 39-aad Mustafi waxaana caawinteeda lahaa Xhaka.
Qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 iyada oo lagu darayo gool banaanka ah oo horey Arsena lowga soo dhaliyey waxa ayana wadarta goolasha isku noqonayaan 2-1 .
Nasiino kaddib waxaa dib loo baastay qeebtii dambe ee ciyaarta Arsenal ayaana halkeedii ka sii waday dhalinta gooladha waxa ayna helaan goolkii sedexaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey
sokratis oo badal ku soo galay ciyaarta .
Uga dambeen ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-1 oo wadarta labada lug ah Arsenal ayaan ugudubtay wareega 16-ka tartanka Europe League .